Ciidamada Dawlada Oo Howlgal Ka Wada Koofurta Mudug. – STAR FM SOMALIA
Ciidamada Dowlada gaar ahaan Guutada DANAB iyo kuwa Daraawiishta Dowlad Goboleedka Galmudug ayaa waxaa la sheegay inay la wareegeen degaanka Qaycad ee Gobolka Mudug.
Ciidamada oo wata Gaadiidka dagaalka ayaa weeraray degaanka Qaycad oo Dhanka Bari Koofurta Mudug 5km ka xiga Degmada Bacaadwayne, waxaana halkaas ka dhacay dagaal culus oo u dhaxeeya Ciidamada dowladda iyo Al-Shabaab, kaas oo uu ka dhashay khasaaro dhimasho iyo dhaawac ah.
Saraakiil ka tirsan Ciidanka DANAB ayaa sheegay inay dagaalka ku dileen Xubno ka tirsan Ururka Al-Shabaab, sidoo kalena Guud ahaan ay gacanta ku dhigeen degaanka Qaycad ee Koonfurta Gobolka Gobolka Mudug.
Wararka ayaa waxaa ay intaasi ku darayaan in Ciidamada dowladda iyo kuwa Galmudug ay degaanka Qaycad ka wadaan howlgallo baaritaano ah, waxaana saraakiisha Ciidamada ay sheegeen inay howlgallada sii wadi doonaan.
Deegaano ka tirsan Gobolka Mudug ayaa Maalmahaan waxaa ka socda howlgal ballaaran, kuwaas oo qaarkood Ciidamada dowladda ay kula wareegeen degaannada Camaara iyo Bacaadweyne ee Gobolkaasi Mudug.